Daqiiqo Muhiim u ah Warshadaha: DSM waxay gelaysaa Dunida CBD ee Wada-shaqeynta leh shaybaarada sare ee Mile • Dawooyinka Inc.eu
Royal DSM waxay la gashay iskaashi ganacsi oo qoto dheer shirkad fadhigeedu yahay Colorado oo lagu magacaabo Mile High Labs (MHL) oo fadhigeedu yahay Colorado si ay u siiso jiilka soosocda ee xalka sayniska ee sayniska.
1 DSM waxay leedahay hami weyn oo caalami ah oo loogu talagalay cannabinoids
2 Waqti qeexan oo loogu talagalay warshadaha
3 Suuqa kobaca weyn ee CBD iyo hemp
Wadashaqeyntu waxay ballaarineysaa awoodaha DSM si loo abuuro barxad ay shirkadaha wax soo saarka macaamiisha ee hormuudka ka ah ay ku soo bandhigi karaan alaabo cusub, oo dhiirrigelinaya caafimaadka oo leh waxyaabo caalami ah oo lagu kalsoon yahay, ayaa lagu yiri bayaanka DSM. saxaafadeed. Wadashaqeyntu waa mid caalami ah, afhayeen u hadlay DSM ayaa noo sheegay, laakiin helitaanka xalalka DSM waxay kuxirantahay xeerarka maxaliga ah iyo diiradda DSM xilligan inta badan waxay kuxirantahay Mareykanka.
Xiriirka, MHL iyo DSM waxay sidoo kale iska kaashan doonaan sameynta xalal gaar ah oo laga soosaaray xalalka cannabinoid, oo ay kujiraan xalalka suuqa u diyaarsan iyo kuwa hordhaca ah (tusaale. CBD iyo noocyada kala duwan ee hemp ee nafaqeeyayaalka yar yar) ee awood u siiya nafaqada, cuntada iyo cabitaannada iyo nafaqooyinka kale ee nafaqada leh. Ujeeddadu waa in alaabooyinka badeecaduhu ay “u soo bandhigaan hal-abuurnimo ay taageerto saynisku xawaare iyo kalsooni”.
DSM waxay leedahay hami weyn oo caalami ah oo loogu talagalay cannabinoids
ka Nederlandse shirkaddu waxay xustay in himilooyinkeeda muddada-dheer ay tahay inay ka faa'iideysato kiliinikada, qawaaniinta iyo khibradda dalabka si loo ogaado faa'iidooyinka yar yar cannabinoids in la baaro. DSM waxay sidoo kale si dhow ula shaqeyn doontaa macaamiisha si ay u horumariyaan jiilalka soo socda ee xalalka sayniska ee taageerada cannabinoid.
Madaxweyne Ku-xigeenka Nafaqada Aadanaha & Caafimaadka ee DSM Waqooyiga Ameerika wuxuu leeyahay: “Tani waa bilowga DSM. Wadashaqeynta aan la leenahay MHL waxay noo noqon doontaa qodob muhiim noo ah anaga oo qaadeyna talaabooyinkeena ugu horeeya suuqan sida xowliga ah u koraya. ”Codka jamhuuriyadda soomaaliya
“Awoodda CBD iyo kuwa kale ee ka soo baxa hemp ee cannabinoids weli si buuxda looma xaqiijin, marka waxaan maalgashanaynaa mustaqbalka qaybta. Maaddaama qaabdhismeedka sharciyeynta lagu qeexay, awoodaha dhammaadka-dhammaadka ee DSM iyo faylalka tacliimeed ee aan la midka ahayn ayaa naga dhigaya inaan si habboon u dhigno hoggaanka iyo qaabeynta suuqa. Qaybtani waxay haysaa ballan qaad weyn waxaanan ku faraxsanahay inaan la kaashanno MHL oo aan ka ciyaarno door muhiim ah furitaanka kartida iyo u suurtagelinta macaamiisha inay abuuraan alaab ujeeddo dhab ah leh. La soco markaan qaadaneyno talaabooyinkeena ugu horeeya suuqan sida xowliga ah u koraya. “
Waqti qeexan oo loogu talagalay warshadaha
Jonathan Hilley, oo ah Madaxa Fulinta ee MHL, oo ​​leh 400.000 oo fiit oo laba jibbaaran oo xarumo wax soo saar ah oo ku yaal Colorado, ayaa ugu yeeray iskaashiga "muhiimad muhiim ah u leh isbeddelka MHL iyo daqiiqad qeexan oo loogu talagalay warshadeena."
"Waxaan rajeyneynaa inaan isku darno khibradeena si aan u gaarsiino hal-abuurnimada cannabinoid ee la qaadi karo, waari kara, wax-ku-ool ah isla markaana siinaysa dhismayaasha alaabada macaamiisha cusub ee xiisaha leh."
Suuqa kobaca weyn ee CBD iyo hemp (afb.)
Suuqa kobaca weyn ee CBD iyo hemp
CBD iyo hemp waxay arkeen koritaan aad u weyn sanadihii la soo dhaafay. Iibinta Mareykanka oo keliya, CBD-da hemp-ka soo baxday waxay ahayd mid ka mid ah kuwa nafaqada dabiiciga ah ee 2019. Warbixin dhowaan soo baxday waxay saadaalisay in iibku kori doono 2021% sanad ka badan sanadka 15.
“Waxaa jira macaamiil xoog leh oo jiidanaysa booska CBD si loo helo xalal tayo sare leh, oo dhiirrigelinaya caafimaadka, laakiin illaa iyo hadda suuqa weli ma uusan gaarin heerar aqoonis ama tayo leh oo la aqoonsan yahay. DSM waxay leedahay awoodaha aasaasiga ah, oo ay weheliso faham qoto dheer ee macaamiisha iyo baahiyaha macaamiisha, si ay uga caawiso sumadaha inay soo galaan suuqa cannabinoid goor hore ayna dhisaan jagooyin hogaamineed. ”
“MHL waa rafiiqa ugu fiican sababtoo ah sida ay ugu heelan tahay joogtaynta, tayada iyo u hoggaansamida sharciyeynta, iyo sidoo kale awooddeeda wax soo saar ee ballaaran ee cannabinoid. Wadajir, waxaa naga go'an inaan horumarinno heerarka warshadaha 'cannabinoid' ay si aad ah ugu baahan yihiin. Qeybahayaga khibrada leh ee khibrada leh waxay taageeraan macaamiisha inta lagu jiro howlaha horumarinta wax soo saarka. ”
Ilaha ao BollyInsinde (EN(DSM)EN), Cuntada Navigator (EN), Muuqaalka Nafaqada (EN)
Dowladda Koonfur Afrika ayaa soo bandhigtay qorshe guud oo looga gol leeyahay in sare loogu qaado isticmaalka…
Si aan uga jawaabno su'aashaas, aan ku bilowno fahamka waxa ay yihiin CBD iyo dareeraha vape. CBD ...